Ndiyikhuphela njani ividiyo yeYouTube? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ndiyikhuphela njani ividiyo kwi YouTube? Uya kumangaliswa ukuba mangaphi amaxesha abantu abakhangela oku ngemini kwihlabathi liphela. KuGoogle, yonke imihla, kukho amawaka ophendlo, enyanisweni, uya kuba nakho ukuqonda xa ubeka ibinzana elithi "indlela yokukhuphela" kwinjini yokukhangela, ezintathu zokuqala zinento yokwenza nenethiwekhi yoluntu.
Kutheni le nto kuya kubakho imibuzo emininzi ngayo? Ilula, ingxaki yile YouTube ayikuvumeli ukuba ukhuphele iividiyo kwiqonga layo phantsi kwazo naziphi na iimeko, ukuze wenze njalo, kuya kufuneka ubengumnini weqhekeza kwaye oko bekungazukuvakala.
Nangona kunjalo, amaphepha amaninzi kunye abaphuhlisi bewebhu Ukwazile ukuthintela imigaqo kunye neemeko zeYouTube kwaye eyona nto imangalisayo kukuba ngendlela yasimahla ngokupheleleyo kwaye ngaphandle kweengxaki ezinkulu.
Kukho iinkqubo ezininzi, isoftware okanye usetyenziso lokukhuphela ividiyo yeYouTube, nangona uninzi lwazo luhlawulwe, okanye ngokubhaliselwa, ezinye zihlala zikhululekile kuyo nayiphi na intlawulo okanye imfuneko.
Umzekelo wezi VLC, iApp yokujonga iividiyo, ethi unokuzikhuphelela simahla Ukusuka kwi-intanethi, ngokukhangela igama layo kwisikhangeli sakho osithandayo. Nje ukuba ifakwe, ikuvumela, phakathi kokukhetha kwayo, ukumisela ividiyo ethile ngokuncamathisela kwikhonkco.
Emva koko, iVLC iya kukunika ikhonkco elitsha oza kulincamathisela kwisikhangeli sakho kwaye uya kulinika ukuba lingene. Ividiyo Izakuvela kuwe kwaye ucofe kuyo, ugcine njenge.
Ngaba ndingayenza ngaphandle kwenkqubo?
Unako khuphela ividiyo oyifunayo ngqo kwi-intanethi, kodwa njani? Ngamanyathelo alula kakhulu esiza kukuxelela apha ngezantsi:
Khangela KwiYouTube ividiyo oyifunayo kwaye uyidlale okanye ukope i-URL yayo.
Khangela isikhangeli sakho esingagqibekanga se "Khuphela ividiyo ye-YouTube"
Zama ezinye zeenketho zokuqala ezibonakala ngezantsi nakwi-bar yendawo ngaphakathi yewebhu ezivelelayo, uncamathisele ikhonkco obukhuphele ngaphambili
Khetha ifomathi ofuna ukuba ifayili yakho igcinwe kuyo, ukuba injalo kwividiyoUnokukhetha umgangatho woku, ukusuka kwelona lisezantsi ukuya kwelona liphezulu, nangona kungazukujongeka njengokulungileyo, kodwa kunokufikelelwa.
Lindela indawo leyo ukucazulula ividiyo yakho kwaye unike ukhetho lokukhuphela.
Into ekufuneka uyikhumbule xa ixesha lokukhuphela Olunye uhlobo lweefayile kwezi ntlobo zamaphepha, kukuba zihlala zibonisa inani elikhulu lentengiso kunye nentengiso, ethi kwiimeko ezininzi ibe ziifayile ezinobungozi ezikhutshelwa kwikhompyuter yakho.
Ke akukho nto yenzekayo engalindelekangaNgalo lonke ixesha khumbula ukugcina i-antivirus yakho esebenzayo isebenza kwaye ungaze ucofe okanye ufake ezi ntlobo zentengiso, kuba awuyazi into onokuyifumana endleleni.
Kwelinye icala, akukho nto yenzekayo ukuba ngempazamo uvule enye yezi ngaphandle kwemvume yakho, kuya kufuneka uyivale ngokukhawuleza okanye ufake i-block blocker, Ukuphelisa ezi ngxaki ngokuqinisekileyo
1 IiNkqubo zokukhuphela
2 Ngaba ndingayenza ngaphandle kwenkqubo?
Isebenza njani i-bots yocingo?